ओलिभर ब्ल्याकबर्नले लन्डन फिल्म फेस्टिवलमा आफ्नो कृति "क्रिस्टी" को अनावरण गरे - iHorror
घर हरर मनोरन्जन समाचार ओलिभर ब्ल्याकबर्नले लन्डन फिल्म फेस्टिवलमा आफ्नो उत्कृष्ट कृति "क्रिस्टी" अनावरण गर्नुभयो
ओलिभर ब्ल्याकबर्नले लन्डन फिल्म फेस्टिवलमा आफ्नो उत्कृष्ट कृति "क्रिस्टी" अनावरण गर्नुभयो
by व्यवस्थापक अक्टोबर 20, 2014
द्वारा लिखित व्यवस्थापक अक्टोबर 20, 2014
भर्खरै, iHorror.com लाई ओलिभर ब्ल्याकबर्नको डरलाग्दो नयाँ स्लाशर फिल्म, "क्रिस्टी" को प्रिमियरमा आमन्त्रित गर्ने सम्मानजनक सम्मान प्राप्त भयो। म भाग्यशाली एक साथ जाने छनौट गरीएको थियो ... मलाई असुविधा छैन यदि मँ गर्दछु।
वेबसाइटमा टिकटहरू बिक्रि भए पनि, त्यहाँ धेरै सीटहरू खाली थिए र मैले यस्तो महसुस गरें कि यो जानाजानी गरिएको थियो, हुनसक्छ प्रीमियरलाई सकेसम्म घनिष्ठ राख्न। यो देख्न एकदमै स्पष्ट थियो कि ओलीका धेरै साथीहरू र परिवार उनलाई समर्थन गर्न आएका थिए आजको सबैभन्दा ठूलो फिल्म के हो। यो कस्तो चलचित्र थियो। ठूलो पर्दामा आफ्नो "ब्रिटिश, धूर्त, इन्डी" प्रविष्टि हेरेपछि र मजा लिइसकेपछि,"गधा पंच" , जुन २ 25 दिनमा मात्रै चित्रित गरिएको थियो, मैले उसको नयाँ कार्यको लागि मेरा दृष्यहरू उच्च बनाए। सबै चलचित्र जानेहरू जान्दछन् त्यसो गर्नु नराम्रो विचार हो, र निर्देशक वा उनीहरूको पृष्ठभूमिको बारेमा केही पनि थाहा नहुँदा अक्सर चलचित्र हेर्दा प्राप्त गरेको आनन्द बिगार्न सक्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, ओलीको कामले मलाई अझै पनि मेरो अपेक्षाहरू भन्दा बाहिर प्रभावित गर्न मद्दत पुर्‍यायो, र मैले धेरै वर्षमा देखेको उत्तम स्लेशर फिल्म हो। "कलेक्टर" र "स्क्रिम" जस्ता चलचित्रहरूबाट तत्त्वहरूको संयोजन गर्दै, यो वास्तवमै तपाईंको अवलोकन-सिनेमा सूचीमा राख्नु उचित हो।
ओलिभरले आफूलाई फिल्मको निर्देशकको रूपमा प्रस्तुत गरे, र औंल्याए कि हामी हाल यस शहरमा थियौं जहाँ उनले धेरै बर्ष वर्षौट सिनेमाको प्रेम खोज्न नजिकैको स्थानीय चित्र घरमा स्कारलेट नाम गरेका थिए। तपाईंले ओलीलाई उनको छनौट भएको कामको रेखालाई सजिलैसँग महसुस हुन सक्छ, र उनी सुन्न अत्यन्त रमाईलो थिए र सुन्नमा आनन्दित भए; सम्भव भएसम्म दर्शकहरूमा धेरै व्यक्तिहरूसँग आँखा सम्पर्क देखा पर्दै। उसको परिचय केहि मिनेट मात्र चल्यो, र जब नजिक पुग्दा, उसले हामीलाई क्रेडिटको अन्त्यतिर हेर्दै जान भन्यो किनकि चलचित्र मात्र अन्त हुँदैन। यसले मलाई उत्साहित तुल्यायो; म चलचित्रको अन्त्यमा धेरै फुटेजको एक डरलाग्दो बिट हेर्न मन पराउँछु, र सम्भवतः अरूले छुटेको केहि कुराको साक्षी दिन्छु।
भोल्युम थप उच्च माथि परिणत गरिएको थियो र मलाई थाहा थियो कि म के मा थिएँ सुरुको क्रेडिटको पहिलो दुई मिनेटमा। मलाई एक कम रिजोलुसन, एक जवान युवतीको क्रूरतापूर्वक हमला र हत्या गरिएको अनलाइन शैलीको भिडियोको साथ प्रस्तुत गरिएको थियो, र हड्डीको नजिक केही चीज देख्दा डरले मलाई तुरुन्तै टाढा हेर्न बाध्य महसुस गरें (वाक्यांश क्षमा)। उनको आक्रमणकारीहरूले त्यसपछि वुडल्याण्ड सेटिंग्समा अब निर्जीव महिलाको शरीरको फोटो लिन शुरू गरे, कुनै पश्चाताप नभएको। यसको अनुसरण गर्दै, यो हत्याको उद्देश्यको लागि एक चतुर अन्तरदृष्टि थियो; कट्टर क्रिस्टी भन्ने धारणालाई बढवा दिने कट्टरपन्थीहरूको एक अनलाइन संग्रह। मेरो अनुसन्धानले त्यहाँ क्रिस्टी नामको पात्रको भूमिका खेल्ने कलाकारहरूमा कोही पनि नभएको बताएको थियो र जब परिचय दृश्यहरूले क्रिस्टी वास्तवमा क्रिश्चियन धर्मका अनुयायीहरूलाई दिइएको नाम हो भनेर बतायो, चलचित्रलाई अब स्पष्टीकरणको आवश्यकता पर्दैन र म बस्न सक्दछु। मेरो सीट र अभिनेता प्रदर्शन प्रदर्शन।
यो धेरै रमाइलो, तर आवश्यक क्षणहरूको साथ एक धेरै रमाइलो चलचित्र थियो। मैले कहिल्यै व्यर्थका डरहरूमा आँखा घुमाउन सकिन, किनभने यो सबै भयानक रूपमा बग्दछ। यो शीर्ष gory मा थिएन, र मलाई ओली आफैले भन्यो कि यो एक सचेत निर्णय थियो। मैले महसुस गरे कि यसमा डराउने प्रशंसकहरूको भूख मिल्काउन पर्याप्त मात्रामा रक्तक्षेपण भएको थियो।
Haley बेनेट एशले ग्रीन क्रिस कोय
छविहरू शिष्टाचार IMDB.com
क्रिष्टि-हत्या गर्ने गुंडागर्दीले उनको खाली विश्वविद्यालय परिसरमा उनको चरित्रको शिकार गरेको कारण चलचित्रले हेले बेनेटलाई पछ्यायो। हेलेले पीडितको चित्रण उत्कृष्ट ढंगले गर्दछ, कुनै श doubt्का नगरी तपाईले एक जना मानिसलाई घबराउने ठाउँमा हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै श doubt्का छैन। धेरै टाढा नदिई, उनी एक मोडमा पुग्छन् जहाँ उनले सी matters्गले मामिला लिन निर्णय लिन्छ, र गधामा हिर्काउन थाल्छ, किन कि उनी नं No. मा ओर्लिन। ग्लेन पैकार्डको सर्वश्रेष्ठ खराब गधा किक गधा अन्तिम केटीहरू.
धेरै लोकप्रिय एशले ग्रीन एक डरलाग्दो चलचित्र वा दुई का लागि कुनै अपरिचित होइन, तर सामान्यतया अभिनेता मिठो र निर्दोष केटीलाई यौन अपीलको साथ खेल्दै छ। यस चलचित्रमा, यद्यपि, उनले उनको साँचो बोलावट फेला पार्छिन् र नराम्रो गधा, डरलाग्दो बिच खेल्छिन् जो हुड हमलाकर्ताहरूका नेता हुन्। उनी अचम्मै थिइन्, र ओलीको शब्दहरूमा, उनको भूमिकामा अथक अनुसन्धान गरेर उनले यति धेरै काममा राखिन्। उनको चरित्रको लागि एक पछाडि कथा सिर्जना गरेर, उनले विशेषाधिकारका लागि घृणा फेला पारे, र केही उत्कृष्ट केही तानिन्।
ओलीले भने कि धेरै अवसरहरूमा खलनायकको भूमिका खेल्ने कलाकारहरूले एक अर्कामा उनीहरूको सम्बन्धमा एकरूपता ल्याउने प्रयास गर्न बाहिर कामको बन्धन बनाउँदछन्। एशलेले क्रिस कोयसँग राम्ररी काम गरे जसले उनको "पार्टनर-इन-क्राइम" परिदृश्यलाई अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गरे किनभने उनी आफैंले हॉरर ईन्डस्ट्रीमा धेरै वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका थिए। उहाँ अब "वाकि De डेड" को कास्टमा हुनुहुन्छ, र पहिलो पटक सीजन episode एपिसोड १ मा शोमा देखा पर्नुभयो।
ओलिभर ब्ल्याकबर्नसँग फिल्म प्रश्न र उत्तर पछि
कार्यक्रमको होस्टले प्रश्नहरूको लागि धेरै समय दिएन र म आफैं मात्र दुई सोध्न सफल भएँ। त्यसोभए, कुराकानीलाई भन्दा लेख्नु भन्दा, मैले सोचेँ कि मैले रेकर्डि upload अपलोड गरेको हुँ र तपाईंहरूको लागि सुन्न दिनुहोस्। खराब आवाज रेकर्डिंगको लागि माफ गर्नुहोस् र यद्यपि रस्टलिling आधा बाटो। ओलीले एल्युमिनियम पन्नीको धेरै भूमिकाहरू ल्याए र हामी सबैलाई क्रिस्टी मास्कहरू बनाउन आग्रह गरे।
घटनाबाट केहि फोटोहरू:
परिचयमा ओलिभर ब्ल्याकबर्न ओलिभर ब्ल्याकबर्न र लन्डन फिल्म महोत्सवको प्रस्तुतकर्ता म र ओलिभर ब्ल्याकबर्न (ओली शटको लागि तयार छैन)
म र ओलिभर ब्ल्याकबर्न (म शटको लागि तयार छैन) ओली मैले बनाएको मास्क राख्न प्रयास गर्दै। ओलीले मास्क लगाएको थियो।
एशले ग्रीनक्रिस कोयहेले बनेटघरक्रिस्टीनवीनतमलन्डन फिल्म फेस्टिवलओलिभर ब्ल्याकबर्नहाल
पहिलो विवरण SyFy को आगामी Sequel 'Sharknado 3' को लागी प्रकट भयो
के तपाईंलाई थाहा थियो माइकल मायर्स लगभग एक हत्यारा जोकर थियो ?!